Golaha Wasiirada DG Puntland oo fadhi degdeg ah ka yeeshay
Hogaamiye ku xigeenka DG Puntland ahna ku simaha Hogaamiyaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa fadhi degdeg ah la yeeshay Golaha Wasiirada maamulkaas, waxa ay diiradda saareen xaaladda Magaalo xeebeedyada Gobolka Bari.
Golaha Wasiirada ayaa dhageystay Warbixinta ku simaha Hogaamiyaha ee la xiriirta xogta uu uruuriyay saacadihii lasoo dhaafay oo Roob Dabayl wata uu ku da’ay Degmooyinka dhulka Badda kulaala.
Wasiirada ayaa dhankooda gudbiyay taladooda degdega ah si wax loogu qabto dadka kunool Deegaannada qaar oo isgaarsiinta ka go’ay, isla markaana aan laga heyn wax warbixin toos ah oo xaaladda deegaannadaas ah.
Guudda GATI ayaa kasoo bilaabatay Badda, saacadihii lasoo dhaafay waxaa qaylo dhaan la gaarsiinayay dadka u badan kalluumeysatada ee kunool deegaanno Xeebeedyada Gobolka Bari si aysan gudaha badda u gelin, sidaas oo kale dadka deegaanka ay ka fogaadaan Xeebaha.
In ka badan 5-ruux ayaa dhimatay oo Soomaali & Ajaanib ah, balse waxaa la helay xogta Shan kalluumeysato reer Yemen ah oo geeriyootay, kadib markii doomihii ay la socdeen biyaha roobka & dabaysha xooggan ay rogeen.
meelaha ugu badan ee duufaanka GATI laga soo sheegay waxaa kamid ah Xaafuun, waxaana go’ay adeegga isgaarsiinta ee shirkadaha Teleefanada bixiyaan, taasi waxa ay adkeysay in xog sugan laga helo.
Maxaa kasoo kordhay Shirka Wada tashiga Musharixiinta